Maraykanka oo baaraya 'farogalin' FBI ku samaysay ololihii doorashada Trump - BBC News Somali
Waaxda caddaaladda ee Mareykanka ayaa samaynaysaa baaritanno ku aadan in saraakiil katirsan laanta dembi baarista ee FBI-da ay ku lug lahaayeen ololihii doorashada ee sanadkii 2016-kii, oo ay uu basaaseen siyaasabo aan habboneyn iyo inkale.
Qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ayuu ku dalbaday inuu ogaado in maamulkii isaga ka horreeyay uu tallabadaasi amray.
Arrintani ayaa ka dambaysay kaddib markii warbaahinta Mareykanka ay sheegeen in FBI-da ay kulan la qaateen saraakiishii ololaha doorsahada ee Trump.
Ku-xigeenka Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa waxaa uu sheegay in tallaabo laga qaadi doono, waa haddii la helo waxyaabo isdaba marin ah xilligii ay socdeen doorashada Mareykanka.
Muxuu ku qotomaa baaritaanka?
Waxaa dalka Mareykanka ka socday baaritaan ku aadan faragelinta la sheegay in Ruushka uu ku sameeyay doorashadii Mareykanka ka dhacday sannadkii 2016-ka.
Madaxweyne Trump oo bartiisa Twiiter-ka soo dhigayay qoraallo taxane ah ayaa sheegay in Ruushku uusan wax farogelin ah ku sameynin doorashadii Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa marar badan la sheegay inuu weerar ku hayay baaritaannada la waday. Trump ayaa sidoo kale FBI-da ku eedeeyay inay basaasin u dirtay kooxdii waday ololahiisa doorashada.